Kismaayo News » Ahlu Sunna iyo Galmudug oo Jabuuti ku heshiiyay
Ahlu Sunna iyo Galmudug oo Jabuuti ku heshiiyay
Kn: Wadahadalkii Jabuuti uga socday hogaamiyeyaasha maamul gobolleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa ku soo dhamaaday is afgarad iyo in labada dhinac kala sixiixdaan heshiis soo afjaraya kala qayb-sanaantii Cadaado iyo Dhuusomareeb.
Qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ku jira ayaa ah in dawlad wadaag la sameeyo, in ciidamada la isku dhafo, in magaca maamul gobolleedku ahaado Galmudug iyo in caasimadda loo wareejiyo Dhuusomareeb. Wadahadallada labada dhinac oo wajigii ugu horeeyay lagu qabtay Nairobi ayaa is afgaradka lagu gaaray Jabuuti la filayaa in xafladda dhamaystirka ay ka dhacdo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Heshiiskan taariikhiga ah ayaa ugu yaraan madaxweyne Xaaf siinaya magac iyo sumcad maadaama uu soo afjaray khilaaf naf iyo maal badani ku baaba’ay oo mudo dheer soo jiitamayay oo ay xalin waayeen raggii asaga ka horeeyay.
Shacabka Galmudug oo ay ragaadiyeen colaado dhinacyo badan ayaa aad u soo dhaweynaya heshiiska ay gaareen labada dhinac, waxayna filayaan in horay looga socdo madasha hadeer la keenay oo aan gadaal looga noqon.